Maalin: Janaayo 14, 2018
Muhtaridan Tababar Gemlik waxay leeyihiin talooyin ku saabsan saldhigga ugu dambeeyay
Mukhtars, oo soosaaray wado kale oo TCDD ah oo loogu talagalay tareenka Gemlik, ayaa leh talo kale iyo codsi: “Barta ugu dambaysa ee khadka waxaa laga helaa xudduudda Engürücük Village. Shirqoolladaasi sidii geed cagaaran iyo geedo saytuun ah [More ...]
Mukhtaar ayaa ka digay TCDD: el Waxaa jira meelo daadad ah oo ku yaalla jasiiradda iyo xayawaannada xayawaanka ee Engürücük.
Codsi ay u gudbiyeen TCDD oo ah madaxa tuulada '7' ee wadada tareenka Gemlik, Gençali waxaa aasaasay carruurta Emirsultan: [More ...]
Muhtarii Dacwad-oogaha Verdi TCDD Wuxuu Baadhayaa Gaadidka Tareenka
Diyaargarow horudhac ah oo mashruucan ayaa la sameeyay oo cabirkii dhulka ayaa la dhammeeyay Daraasaddan, dhulka lagu wareejinayo wareejinta tareenka ayaa la go’aamiyay. Xaqiiqdii, Raiisel wasaare ku xigeenka Hakan Çavuşoğlu wuxuu sheegay in milkiilayaasha dhulalka lagu wareejinayo tareenka Gemlik lagu casuumi doono inay tanaasul sameeyaan. [More ...]
Kordhinta Tram Stop in Gaziantep Kordhay Capacity Capacity
Kordhinta joogsiyada iyo kordhinta gawaarida gawaarida taraafikada ee ay maamusho Gaziulaş, oo ah shirkad hoos timaad degmada Gaziantep ee Magaala Weyn, ayaa kordhisay awoodda rakaabka. Awoodda baabuurta ku shaqaysa nidaamka tareenka taas oo ka dhigtay in ay ka dhigaan kuwo shaqaynaya oo ballaadhiya joogsiyada. [More ...]
Khudbaddiisa, Can Cankesen, oo ah Guddoomiyaha Sarkaalka Gaadiidka-Sen, wuxuu soo jiitay muhiimadda dadaallada xubnaha ee sii wadidda guulaha. Sarkaalka Gaadiidka-Adiga 6. Golaha Guud ee caadiga ah waxaa lagu qabtay Ankara. Isaga oo ka hadlaya Sarkaalka Golaha Guud - Sen General [More ...]
Metrobuses, oo ay isticmaalaan hal milyan oo qof maalin kasta, ayaa la geeyaa gawaarida dhammaadka maalinta waxayna galaan nidaam nadiifin ah. Özge Kara oo ka soo jeeda Milliyet ayaa booqday Edirnekapı Metrobus Garage waxaana daawaday tallaabo tallaabo tallaabo tallaabo tallaabo ah. [More ...]
Baska dadwaynaha ee 14, kaas oo qaadaya inta u dhaxaysa Gemlik iyo Bursa dhexdeeda Burulaş, ayaa dib loo cusbooneysiiyay gawaaridii moodada ee ugu dambeeyay gaadiidkuna wuxuu noqday mid raaxo badan. Alinur Aktaş, Duqa Magaalada Caasimadda, wuxuu lahadley basaska dadweynaha wuxuuna yiri, “Dowlada Hoose ee Magaalo Xeebeedka [More ...]
Tareenka Xawaaraha Sare ee Burdur?
Dadka Jamhuuriga ee xisbiga (CHP) xigeenka Mehmet Gok Burdur Burdur tareen-xawaaraha sare ee laga filayo oo ka mid ah dadka reer Grand National Assembly ee Turkey (Baarlamaanka) sii ay u guuraan ajandaha. Kuxigeenka Göker, Burdur xawaare sare ayaa qorsheeyay inuu dhaafo [More ...]
Talo-siinta Talooyinka kale ee Tilmaamaha Tuulada ee Tuulada ee Gemlik Tareenka
Codsigoodii ay u gudbiyeen TCDD, madaxa tuulada 7 ee wadada la qorsheeyay in lagu gudbo tareenka Gemlik, waxay sameeyeen digniino aad u xasaasi ah oo ku saabsan dhulalka waxyeelloobi doona sidoo kale waxay soo jeediyeen jidad cusub. Xirmooyin dheeraad ah oo loo yaqaan 'X XXX' halka ay TCDD ka shaqeyso [More ...]
Waxaa loo aasaasay sidii kurulan tareenka tareenka kapsamında iyada oo ku xaddidan sharciga ku saabsan xorriyadda gaadiidka tareenka, 1 wuxuu shaqeynayey ilaa Janaayo 2017. ujeedadiisu tahay inay noqoto astaanta adduunka. Marka la eego baaxadda sharciga ku saabsan xoreynta gaadiidka tareenka, [More ...]
Maanta taariikhda: 14 Janaayo 1940 at Hicaz Railways ...